bracking news>>चीनमा फेरि फेला पर्‍यो नयाँ ‘फ्लू भाइरस’, विश्वभर महामारी फैलन सक्ने ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/bracking news>>चीनमा फेरि फेला पर्‍यो नयाँ ‘फ्लू भाइरस’, विश्वभर महामारी फैलन सक्ने !
bracking news>>चीनमा फेरि फेला पर्‍यो नयाँ ‘फ्लू भाइरस’, विश्वभर महामारी फैलन सक्ने !
एजेन्सी- विश्वव्यापी महामारी बनेर फैलिने सक्ने क्षमता भएको एउटा नयाँ फ्लू भाइरस चीनमा फेला परेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
यो अहिले फैलिएको त छैन तर यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्राध्यापक किन-चाउ चाङ र उनका सहकर्मीहरूका अनुसार यसलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ।
यूकेको नटिङघम यूनिभर्सिटीमा कार्यरत प्राध्यापक किन-चाउ चाङले भने, “अहिले कोरोनाभाइरसका कारण हाम्रो ध्यान मोडिएको छ। तर हामीले सम्भावित खतरनाक नयाँ भाइरसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।” बीबीसीबाट
स्पेनले आप्रवासी माथि कडाई गर्ने, कोरोना जोखिम बाबजुद नेपालीहरु धमाधम पोर्चुगलतिर !
साउदीमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको ४ करोड ६५ लाख रकम नेपाल पठाइयो (विवरणसहित)